UMbalula ugxekwa ngolukaBeyonce | IOL Isolezwe
UMbalula ugxekwa ngolukaBeyonce
Isolezwe / 20 June 2012, 11:45am /
ISIHLABANI se-R&B uBeyonce Knowles okuthiwa angase azonandisa kuma-SA Sports Awards nokushiye abantu abaningi becasukile ngenxa yemali enkulu okuthiwa uzoqashwa ngayo
UNGQONGQOSHE wezeMidlalo kuzwelonke, uMnuz Fikile Mbalula, ogxekwa ngezinhlelo zokuletha uBeyonce kuma-SA Sports Awards ngezigidi zamarandi
SEKUSUKE omkhulu umsindo ngezinhlelo zikaNgqongqoshe wezeMidlalo kuzwelonke, uMnuz Fikile “Razzmatazz” Mbalula, ofuna ukuletha umculi waphesheya kwezilwandle, uBeyonce Knowles, ngezigidi zamarandi ukuba ukuzonandisa uma sekuklonyeliswa abenze kahle kwezemidlalo kuleli.
Kubikwa ukuthi uMbalula uhlela ukuletha lesi sihlabani seR&B ukuba sizonandisa kumaSouth African Sports Awards ngoNovemba 24 no-25 nonyaka.
Nyakenye kwakunandisa uBrandy Norwood wodumo lwezingoma ezithi Full Moon nethi Long Distance nezinye. Kwakukhona nesihlabani somlingisi uVivica A Fox.
Abantu bathi uMbalula “umosha imali yabakhokhi bentela” ngokuletha labaculi ekubeni bekhona abakuleli abanganandisa ngemali ephansi kunekhokhwa uma kulethwa abaphesheya.
UBeyonce kuthiwa ngehora ukhokhelwa imali elinganiselwa ku-R17 million.
Umculi ohlonishwayo we-opera, uSibongile Khumalo, enkundleni yezokuxhumana i-Twitter, ubhale ukuthi uyalithanda izwe lakhe kodwa kukhona abazobona uBeyonce emcimbini okhethekile kodwa bengeke bebakhokhele abaculi bakuleli imali abazomkhokhela yona.
“Kuphi ukwesekwa ngokwezimali kulabo asebevele bekwezemidlalo abadinga ukwesekwa? Kwenziwa yini ukuthi kuhlale kungenamali eyanele emicimbini yokukhokhela abaculi bakuleli,” kubuza uSibongile.
UKabomo yena uthe: “Into ehlekisayo wukuthi ngithole ucingo kwabahlela le miklomelo. Ngibanikeze ukuthi ngibiza malini futhi nginesaphulelo kodwa bathi ngimba eqolo.”
Imbongi uNtsiki Mazwai uthe unabaculi bakuleli ancamela ukubabukela kunoBeyonce.
“Uzwa nini kuthiwa eMelika banemiklomelo yezemidlalo bamema uSimphiwe Dana? Hhayi Mbaks (Fikile Mbalula) sihloniphe. Ngikubona kunyanyisa ukuthi uhulumeni wethu uzimisele ngokukhokhela abaculi baseMelika izigidi. Kungukusidelela thina njengabakuleli,” kusho uNtsiki.
Umculi we-kwaito, u-Arthur Mafokate, uthe akangahlaselwa uMbalula ingakaziwa incazelo yakhe ngokumema uBeyonce.
“Baculi bakuleli asiqaphele ngezinto esizishoyo ngoba sonke siyaqashwa emazweni angomakhelwane kweminye yemicimbi yokuklomelisa yakhona. Asingakhohlwa futhi wukuthi sizizonda thina, ake sithi mhlawumbe bekuqashwe uZahara othola u-R200 000 angithi besizokhononda futhi, kuyiqiniso noma cha,” kubuza u-Arthur.
Okhulumela uMbalula, uMnuz Paena Galane, uthe bazophawula kahle ngalolu daba ngo-Agasti.
“Ngeke ngikwazi ukuphawula manje ngoba imininingwane egcwele yale miklomelo sizoyikhiphela umphakathi ngo-Agasti,” kusho uGalane.